Furitaanka - Majaladda "Nidaamka Baradhada"
Bogga guriga Madaxa Digest Sayniska Daahfurka
Deeq ayaa loo qoondeeyay saynisyahanada Crimean si ay u soo saaraan sunta cayayaanka DNA
Saynisyahano ka tirsan Jaamacadda Federaalka ee Crimean ayaa noqday kuwa ku guuleystay deeq ka timid Hay'adda Sayniska Ruushka, adeegga saxaafadda ee Jaamacadda Federaalka Crimean oo loogu magac daray V.I. Vernadsky. Horumarka ayaa u heellan...
Baradhada aan ubaxa lahayn ayaa laga abuuray Machadka Cilmi-baarista ee All-Ruushka ee Bayolojiyada Beeraha
Dalka Ruushka, iyadoo la kaashanayo tafatirka genome-ka, waxaa la sameeyay qaabab cusub oo baradho ah oo aan ubaxin, waxaana sidoo kale socda shaqo lagu abuurayo qaabab ...
Saynis yahano ka tirsan jaamacada Hiroshima ayaa daahfuray dhisme cusub oo ay ku jiraan brokoli iyo kaabaj kale oo ka caawin kara la dagaalanka noocyada kansarka qaarkood.
Noocyo baradho ah oo leh caabbinta adag ee nematode baradhada samaysa ayaa la aqoonsaday
Saynis yahanada Machadka All-Ruushka ee Khayraadka Hiddaha ee Dhirta. N.I. Vavilov (VIR) iyo Machadka Ilaalinta Dhirta oo dhan-Ruushka (VIZR) oo isticmaalaya hidda-socodka molecular ...
Saynis yahanada Singabuur waxay abuuraan baakado khudaar noole deg deg ah oo dila bakteeriyada
Lahaanshaha beddelka bakteeriyada iyo baayo-goysyada beddelka filimka caadiga ah waxay kaa caawin kartaa dhimista qashinka iyo hagaajinta badbaadada cuntada. Cilmi-baarayaal ka socda Harvard ...
Casiirka Beetroot oo lagu daro waxyaabaha lagu daro ayaa bedeli doona sunta cayayaanka ee dagaalka lagula jiro kaneecada kaneecada
Khubaro ka socota jaamacadda Stockholm ayaa helay hab fudud oo badbaado leh oo lagu dilo kaneecada gudbisa duumada. Bishii Disembar, Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa sheegay ...
Shan nooc oo baradho ah oo cusub oo lagu beerayo Afrika
Shan nooc oo baradho ah oo u adkaysta cimilada iyo cudurrada oo ay soo saartay mashruuca cilmi-baarista Quikgro ee uu hoggaamiyo James Hutton Institute ee Scotland.
Saynisyahanada Ruushku waxay abuuri doonaan cayayaanka bakteeriyada ka dhanka ah lamidka baradhada Colorado
Baradhada baradhada Colorado waa mid ka mid ah cayayaanka ugu khatarta badan ee baradhada. Way adag tahay waxayna si dhakhso ah u noqotaa mid u adkaysata cayayaanka. Saynis yahano Ruush ah...
Tiknoolajiyad cusub ayaa la sameeyay si loo darso xididdada dhirta iyada oo aan waxyeello loo geysan
Calaamadaha hore ee diiqada dalagga, sida abaarta, waxaa lagu heli karaa iyadoo la baarayo nidaamka xididka. Laakin si sax ah wax loo barto...